Global Global LED Digital Display sy Micro LED Display Market Outlook- LEDinside
Araka ny tatitra farany avy amin'ny LEDinside, fizarana iray an'ny orinasam-pikarohana momba ny tsena TrendForce, Global Global LED Digital Display ary Micro LED Display Market Outlook, noho ny fitotonganan'ny harinkarena, ny tsena LEDdisplay eran-tany dia niaina fitomboana voafetra ary nihena ny fangatahan'ny tsena ny fampisehoana nentim-paharazana ...
Tsy ny LED LED ivelany rehetra dia noforonina mitovy. Noho ny safidy sy ny endri-javatra maro be misy, ny fifidianana ny mety indrindra dia mety ho fanamby. Ny LED Display sasany dia manasongadina ny haavon'ny kalitao raha ny hafa kosa mifantoka amin'ny fanomezana fampisehoana LED ivelany lafo vidy indrindra. Iza amin'ireo no tadiavinao ...
Ny fampisehoana LED ivelany dia mifantoka bebe kokoa amin'ny fikojakojana, izay niaina ny rivotra sy ny orana. Noho izany dia mila misafidy ny fitaovana tsara kokoa isika, ary ankehitriny dia maro kokoa ireo mpamokatra fampisehoana LED izay miteraka kalitaon'ny fisehoan'ny LED izay tsy rafitra fiarovana tsara. Fomba / dingana Maro ny mpanjifa tsy mazava t ...
Fampisehoana LED amin'ny sehatra tsirairay
1, EachinLED Dingana LED Fampisehoana famaritana EachinLED dingana LED fampisehoana dia mahazatra taorian'ny andian-fotoana be dia be: fivoriana mpianatry ny oniversite sy fihaonana. Izy io dia mitondra ny mpanatrika ny fiaraha-misakafo mijery rehefa mampiasa ny sehatra LED seho ho an'ny aoriana. EachinLED Stage LED Display 2, EachinLED Stag ...
Fampisehoana LED Stadium tsirairay avyLED
1. Fampisehoana LED isaky nyLED kianja Fampisehoana LED kianja LED tsirairay, izay natao arakaraka ny filan'ny lalao ara-panatanjahantena, dia afaka mandefa ny doka ara-barotra momba ny mpanohana, fotoana lehibe, filalaovana hetsika miadana, fitifirana akaiky sns. mankafy ny lalao tsy misy matte ...
Vahaolana fampiratiana LED isam-bolana
1. Ny famaritana ny fifamoivoizana LED isaky nyLED fifamoivoizana LED dia ampiasaina mba hitana ny anjara asan'ny fampisehoana LED fifamoivoizana, ampiharina amin'ny lalambe. Izy io dia vita amin'ny vatan'ny efijery LED, ny rafitra fiara, ny rafitra fanaraha-maso, ny fitaovam-pifandraisana, ny rafitra herinaratra ary ny varavarana, ny trano sns ...